XAGAY SALKA KU HAYSAA MUSHKILADDA MUSLIMIINTA?!!! – Sumcadda Islaamka
Mushkilada maanta haysata muslimiinta maaha mid uu islaamku u keenay sida mulxidiinta iyo kuwa diinta ka tagay rumeysan yihiin,mana ahan mid ay axaadiista rasuulka scw u keeneen sida ay kuwa quraan kaliya ayaan qaadanaynaa ku dooda aaminsan yihiin,mana aha abuuhureyra iyo bukhaari iyo muslim iyo saxaabo iyo taabiciin kale midna kuwa ka masuulka ah mashaqada muslimiinta maanta iyo mar horeba meel kasta ku haysata.
Islaamku waxa uu muslimiinta u keenay isu geyn waa iimaan iyo nabad iyo akhlaaq iyo raxmad iyo cadaalad iyo in dulmiga laga dheeraado intaasna waxay ku cadahay quraanka uu Alle inoogu soo dhiibay rasuulka scw iyo sunada uu ku bayaamiyay nabiga scw waxyigaas.
Quraanka iyo sunada waa laba masdar oo aasaasi u ah tacaaliimta islaamka mana kala haraan oo ujeedada iyo hadafka ay u socdaan waa sugidda iimaan saafi ah iyo akhlaaq sare oo basharka ka korinaysa dulmi iyo cadaalad darro iyo nolol liidata.
Asxaabta rasuulka scw uu abuu hureyra rc ka mid yahayna waa kuwa ina soo gaarsiiyay wixii ay nabiga scw ka maqleen, axaadiista ay asxaabtaas nabiga scw inaga soo gaarsiiyeena waa khabar ay dhici karto inay ama saxaan ama wax ka khaldaan dadkii ka soo werinayay asxaabta ee taabiciinta iyo intii ka dambeysayba ah.
Culimada iyo imaamyada isu xilsaaray soo hubinta axaadiistaas rasuulka scw loo tiirinayo oo ay bukhaari iyo muslim iyo culimada kalaba ka mid yihiina waa dad dadaalay oo isku dayay inay raadraacaan oo kala hufaan axaadiista rasuulka loo tiirinayo maxaa ka run ah maxaa ka been ah oo waa kuwaa intii tabartooda ah khabarkii umadda nabigeeda loo tiirinayay u kala saaray saxiix iyo daciif iyo darajoyin lagu heshiiyay oo ay umadda badankeedana aqbashay,tiiyoo ay dhici karto inuusan dadaalkaasi kaamil ahayn ama wax ka khaldan yihiin waayo waa dadaal bashar oo ama ubaahan inay sii wadaan oo wax ku daraan ama ka badalaan culimada takhasuska u leh baabkaas ama ay sidiisaba u daayaan haday dan u arkaan inaan waxba laga badalin.
Kolka ma mudna in mushkilada umadda laga doono meel aysan jirin,xaqiiqdii islaamka umadda wuxuu u keenay cisi iyo sharaf iyo wanaag iyo akhlaaq kalliftay inuu maanta ka mid yahay diimaha ugu waaweyn ee dunida laga aaminsan yahay isla markaana yahay waqtigan diinta loogu soo galid badan yahay sida ay qireen jihooyin caalami ah oo arimaha diimaha baara.
Mushkilada muslimiinta maanta haysata waa mid naftooda ku eg oo ay inta badan fahamyo diimeedyo khaldamay u keeneen ee maaha mid asal islaamka iyo tacaaliimtiisa dhowrsoon ka timid,qofkii si daganaan iyo miyir qab ah arintaas u baarana wuu soo taaban karaa xaqiiqdaas biyo kama dhibcaanka ah.
Waxaa kale oo mashaqada muslimiinta ku habsatay u sabab ah kolkay iska diideen midnimadii iyo dulqaadkii iyo wadanoolaanshihii ay diintooda ugu baaqaysay oo ay noqdeen kooxo iyo qabiilooyin iyo beelo dhexdooda ka dirirsan oo hadba isku soo duula.
Ugu dambeyntii muslimiinta aan ka midka nahay ee maanta nool waxaa la gudboon inay qaataan ujeedooyinka wanaagsan ee uu islaamku ku baaqayo sida iimaanka saxiixa ah iyo akhlaaqda wanaagsan oo ay ugu horeeyaan nabadda, cadaalada,naxariista,iyo dad la dhaqanka,oo ay iska daayaan cadaalad darada iyo dulmiga uu islaamku la dirirayo,waana inay ka dheeraadaan fahamyada khaldamay ee ay wadaan firqooyinka marin habowsan ee umadda kala qaybinaya kuna dhex faafinaya caro,nacayb,xiqdi,isgaaleysiin iwm,kuwaas oo aan intooda badan ogoleyn isu dulqaadashada iyo wadanoolaanshaha oo falsafadda ay ku mashquulsan yihiina ay tahay inta badan mid waqtigeedii uu dhacay oo diinta iyo nolosha iyo caqliga iska horkeenaysa.
CAALAMKA ISLAAMKA, DAAWO VIDEO
MUHIIIMADDA WAX AKHRINTU KU LEEDAHAY NOLOSHEENA